Ọ bụ ihe na biakwa obibia eziokwu na dị iche iche formats nwere ha dị iche iche uru na ọghọm na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ọ bụghị nanị na nke kacha mma format ma kwesịkwara ime ka n'aka na onye họọrọ na-abụghị nanị keere a ezi uche n'ụzọ ma ngwaọrụ na-achọrọ nwekwara enwere na-enyere ndị ọrụ bụrụ na nke ọ bụla nke na nsogbu.
Azịza nke doro ajụjụ
Ọ bụ E kwuru na usoro ihe omume ahụ bụ na-eji na nke a bụ FCPX na ike tọghata AVCHD video ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ibe nke ọmụma na e echekwara na draịvụ ike. The data na-apụ na-depụtaghachiri na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na FCPX ibubata window a na-ahụ na-eji nke ga mata data a ga-dị ka usoro ihe omume. E nwere ụfọdụ nhọrọ na-adịghị na FCPX Ozugbo ibubata window e meghere na otu dị otú ahụ nhọrọ bụ na onye ọrụ nwere ike ghara uncheck nhọrọ oyiri media ka ihe nchekwa na ọ bụ n'ihi ihe iseokwu a na usoro ihe omume na-agụ nweta dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ a kaadị. Ọ bụrụ na ndị na nhọrọ a mere dị mgbe ahụ, ọ pụtara na footage ga-duplicated na ọdịnaya ga-converted dually nke ga-ịmụba nrụgide na usoro. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na footage na e dị ka FCPX anya dị ka ọnụ ọgụgụ n'okpuru. Ebe a dabeere ọzọ àgwà nke FCPX na ọ bụ ka footages na e kwukwara na interface ịnọgide ma ọ bụ na-ndokwa arịa na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ka nke mkpachị na-enyocha tupu ha na-dị ka interface zere ihe ọ bụla nke.
Importing vs. Transcoding (ma ọ bụ Rewrapping)
N'ihi na nke a nzọụkwụ ndị Wondershare Video Converter Ultimate for Mac bụ kacha ngwọta na ọ ga-eme n'aka na nke kacha mma e nyefewo ha n'aka ka ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Usoro ihe omume e mepụtara na nke kacha mma n'ụzọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results enweghị ihe ọ bụla isi ọwụwa. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na-nyere ka Mac na doro nke site na nbudata a usoro. The Wondershare Video Converter Ultimate for Mac bụghị nanị Mbubata niile Meta data ma ọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ na-anọgide na ọnọdụ ya ma ndị fọdụrụ nke Filiks e weere elu site na usoro ihe omume na-nke kpebiri ozugbo o kwere omume. Ọ bụkwa otu nke kasị mma usoro iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke pụrụ ịkpata nke na-kpebiri na omenala omume ugbu ka ọrụ. Ọ bụ ya mere aro na e weere dị ka otu n'ime ndị kasị mma na fim bụ maka nke usoro ihe omume bụ ihe na-egosi na ihe niile ya onwe ya. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ ga-bụghị naanị na nke kacha mma ọrụ na nke a ma ndị na-abụghị oru ọrụ ga-enweta ndị kasị mma nkọwa dị ka usoro ihe omume dị nnọọ mfe iji na ọ dịghị mgbagwoju mbipụta na-mgbe hụrụ na nke a. Niile ndị ọrụ na-ala azụ eji nke a usoro na-gwara ibudata ikpe oyiri si URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html na-esi na ha mkpebi gbanwere n'ihi na n'aka.
Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na-nyere ka usoro na OS na maka otu ihe ahụ ọ na-gwara iji nweta ụzọ na-online iji jide n'aka na doro nke na-kpebiri na nke a nkuzi dabeere. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro nke e kwuru okwu ya ná URL http://daredreamermag.com/2013/06/04/importing-avchd-video-into-fcpx/-agbaso nke ga- nwekwara ike kọwara na n'ụzọ dị mfe iji jide n'aka na ndị ọrụ na nke kacha mma ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. E nwere ụfọdụ na-atụ aro na nke a na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị a na-soro na-eme ka n'aka na-arụpụta na-na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma convertor na-eji na nke a iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na ya pụta bụ stellar.
Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na convertor na a na-họọrọ bụghị nanị mfe iji ma onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma na ojiji ka ndị kasị mma convertor onye na-nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe results na nke a. Usoro nke a onye ọrụ kwesịrị ịgbaso na-agụnye ụfọdụ nzọụkwụ na pụrụ ịbụ ọhụrụ na ndị ọrụ na-abụghị oru na ọdịdị na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na-juputara emejuputa atumatu na etinyere na ọ bụrụ na Ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla nke ma ọ bụ nsogbu chere ihu mgbe n'itinye ha mgbe ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị inwe na ọkachamara aka na nke a iji jide n'aka na usoro mgbe na-apụ na-ezighị ezi na-anọgide na na na egwu. Ọ bụrụ na onye ọrụ ka chere ihu ọ bụla nke mgbe ahụ online forums kwesịrị tinye n'ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge na ọzọ mmepụta bụ ihe kasị mma nke kasị mma. Mgbe ọ na-abịa AVCHD format mgbe ahụ e nwere ndị ụfọdụ ihe ndị na-na--ahụ kwuru na usoro e mepụtara site Sony na Panasonic Corporation na Ọdịdị bụ nnọọ mgbagwoju na-eso dị ka video na yiri data dị nnọọ n'okpuru nsogbu na e kere site na nke a Ọkpụkpọ na resultantly onye ọrụ mgbe ọkọkpọhi data na ndị ọzọ yiri components mfe na nnennen nnennen.
> Resource> FCP> Olee mbubata AVCHD ka ikpeazụ ịkpụ pro x on Mac?